Home » Toerana fitsangatsanganana » Nosy Turks sy Caicos: Fanavaozana ny fizahan-tany COVID-19 ofisialy
Ny minisiteran'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany any Turks sy Caicos dia maniry ny hanome toro-hevitra amin'ireo mpitsidika sy mpiara-miombon'antoka amin'ny indostrian'ny fizahan-tany momba ny fanovana ny lalàna mifehy izay mety hisy fiantraikany amin'ny dia mankany amin'ny toerana haleha. Azafady mba jereo ny hery vonjy taitra (Covid-19) (No. 4) Ny fitsipika 2020 izay hiasa amin'ny 6:01 maraina amin'ny 4 Mey 2020 ary, raha tsy misy ny lalàna 8 (3), dia tapitra amin'ny 6:00 maraina amin'ny 1 Jona 2020.
8 - Fanidiana ny seranam-piaramanidina sy seranan-tsambo
Ho an'ny tanjona hisorohana, hifehezana ary hanakanana ny fiparitahan'ny COVID-19—
ny seranam-piaramanidina rehetra dia hikatona hatrany amin'ny sidina rezionaly sy iraisam-pirenena, na ara-barotra izany na tsy miankina;
ny seranan-tsambo rehetra dia hikatona hatrany amoron'ny fitaterana an-dranomasina isam-paritra sy iraisam-pirenena; ary
tsy misy olona mahazo alalana hiditra na hamakivaky ny Nosy Turks sy Caicos.
Ny fetra voarakitra ao amin'ny fifehezana (1) dia tsy mihatra amin'ny—
sidina mivoaka na sambo ho avy, raha misy izany;
sidina enta-mavesatra na sambo mpitondra entana, araka ny tranga misy;
sidina mpandefa iraka;
fijanonana ara-teknika (mijanona amin'ny fiaramanidina hameno solika ary mandroso amin'ny toeran-kafa);
sidina vonjy taitra ankatoavin'ny Fahefana Avotra sivily sy ny manampahefana seranam-piaramanidina; na
sambo fitaterana an-dranomasina, na izany aza tsy misy olona avela hidina na hiala ao amin'ilay sambo, afa-tsy ny Lehiben'ny mpitsabo na mpiasam-panjakana misahana ny fahasalamana.
Ny seranan-tsambo dia hikatona hatramin'ny 30 Jona 2020 ary tsy misy sambo fitsangantsanganana avela hiditra ao amin'ireo nosy hatramin'ny 30 Jona 2020, miankina amin'ny torolàlana avy amin'ny CDC sy ny indostrian'ny fitsangantsanganana.
Ny Minisiteran'ny fahasalamana any Turks sy Caicos dia nanoro hevitra ny besinimaro fa hatramin'ny 12 maraina tamin'ny 3 Mey 2020 dia tsy nahita fiovana nandritra ny 19 ora ny toerana COVID-24 tany amin'ny Nosy Turks sy Caicos. Ny isan'ny tranga tsara voamarina dia mitohy mijanona amin'ny roa ambin'ny folo (12); misy tranga enina (6) ankehitriny sitrana tamin'ny COVID-19.
Ny governemanta Turks sy Caicos Islands dia manohy manara-maso an'io toe-javatra io ary hanavao tsy tapaka ny sarambabem-bahoaka.